Iska Ilow Karim Benzema: Waa Kuma Xiddiga Lagu Tilmaamo ‘Geesiga Aan Loo Heesin’ Ee Real Madrid? | Laacibnet.net
Iska Ilow Karim Benzema: Waa Kuma Xiddiga Lagu Tilmaamo ‘Geesiga Aan Loo Heesin’ Ee Real Madrid?
Kubbad cidhibta loogu soo dhiibay ayaa lugtiisa gashay, waxaanu hore u qaaday hal tallaabo, kaddibna iyadoo la jiidanayo ayuu isku tuuray, lugtiisa bidix ayaanu la tiigsaday si uu shabaqa ugu hubsado. Sidaas ayay Real Madrid laba dhibcood ugu haysaa hoggaanka horyaalka LaLiga.
Laakiin goolkan oo kaliya maaha, waxaase uu udub-dhexaad ka yahay waxqabadka kooxda min difaac, kubbad dhis, ilaa heer uu dhalinteeda soo gaadho.
Xiddiga reer Brazil ee Casemiro, waa ‘waa halyeyga aan loo heesin’ ee Real Madrid jooga, waxaanu xili ciyaareedkan dhaliyey goolkiisii afraad, sida uu halgan difaacis iyo kubbad dhis ugu jiro ayaanu hurdada kasoo kacaa marka ay kooxdiisu uga baahato gool dhalinta.
Goolkiisii ugu horreeyey ee xili ciyaareedkan, waxa uu yimid usbuucii ugu horreeyey ee ay Real Madrid la kulantay Levante, waxaana xilli ay adag tahay uu dhaliyey goolka guusha, iyadoo maalintaas ay dhamaan indhaha caalamku hayeen Eden Hazard oo ay u ahayd ciyaartiisii ugu horreysay.
Sevilla ayaa noqotay kooxda labaad ee gacanta Casemiro sababsata, waxaanu saddex dhibcood kooxdiisa uga soo qaaday Los Nervionenses oo uu laba gool ka dhaliyey.
Wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain, ayaa 28 jirkan ku tilmaamay ciyaartoyga ugu dhamayska tiran leh ee ku jira kooxda tababare Zinedine Zidane, isla markaana uu samayn karo wax kasta inta ay ciyaartu socoto. Gool uu dhaliyo, difaac uu u adkeeyo oo ay ku ilaashadaan shabaqooda, kubadda oo uu u dhiso, madax xooggan oo uu leeyahay iyo xataa lag uu meel fog kaga toogto goolka.
Zidane wuu ogyahay muhiimadda uu kooxdiisa u leeyahay Casemiro, waxaana xili ciyaareedkan uu yahay laacibka kulamadii ugu badnaa ciyaaray, iyadoo aan wax nasasho ah la siinin illaa laga soo gaadhayay kulamadii 17aad ee LaLiga ee fasal ciyaareedkan.
Marka uu Casemiro maqan yahay, su’aasha ugu badan ee Zinedine Zidane lagu weydiiyo shirka jaraa’id ayaa waxay tahay sida uu u buuxinayo booska laacibka reer Brazil iyadoo lasii tilmaamo in kooxdiisu ay diciif tahay marka uu Casemiro maqan yahay.
Muhiimad kasta oo uu khadka dhexe ka leeyahay, haddana Casemiro waxa uu marar badan noqdaa dhaliye kooxdiisa oo dhibaato ku jirta kaga fujiya. Waxay sidaasi dhacday finalkii Champions League ee 2017, ciyaartii Napoli iyo kulankan ugu dambeeyey ee Espanyol ee ay hoggaanka LaLiga labada dhibcood ku qabteen.
Wa Run Casamiro Wa Halyeyga aanlohesin
Wuxu leyahay difacsho burburin gool dhalin wakhtiyada adagna walgu baxsada
ALI MOHAMED JIMALE says:
Xaqiiqqdu waa saas waana ku mahadsantihin xogta aad na siisaan mar walba